नेपाली मितिः वि.सं. २०७५ । नेपाल सं. ११३८ । योग सं. ३९ । श्रावण महिनाको २९ गते मङ्गलवार ।
अँग्रजी मितिः ई.सं. २०१८ अगस्त महिनाको १४ तारिख ।
तिथीः दक्षिणायन, वर्षा ऋतु श्रावण शुक्लपक्षको तृतीया, ०९ः१५ बजेपछि चतुर्थी ।
योगः सिद्ध ।
नक्षत्रः उत्तरफाल्गुनी, २१ः५९ बजेपछि हस्त ।
करणः गर ०९ः१५ बजे उपरान्त वणिज, २०ः२२ बजेपछि भद्रा ।
काठमाडौंमा सूर्यास्तः १८ः४१ बजे ।
राहुकालः १५ः२४ बजेपछि १७ः०३ बजेसम्म ।
यात्राः भद्रा, राहुकाल र अशुभबेला छाडी, शुभमुहूर्त पारी पूर्व र दक्षिण दिशाको लागि उपयुक्त ।
वृष राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन बुद्धिविवेकको प्रयोग गर्न पाइने दिन छ । विद्यार्थीको लागि बढी उपयोगी दिन रहनसक्ने छ । प्रतिष्ठा र छविको बचस्व स्थापित गर्नसकिने र प्रशंसा पनि मिल्नेछ । कला कुशलता बढ्ने र सैद्धान्तिक पक्षमा खरो उत्रन सकिने छ । कर्मक्षेत्र तथा व्यवसायमा प्रगति हुनाले आर्थिक लाभ गर्न पनि सकिने छ । सन्ततीको तर्फबाट सुख एवम् सन्तोष पाइनेछ । आज यहाँलाई पाँच अंक, रातो रङ्गको व्यवहारिक प्रयोग शुभ हुनेछ भने भगवान श्री गणेशजीको स्तुति आराधना गर्नु शुभप्रद हुनेछ ।
मिथुन राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन अनुकूल मान्न अल्लि नसकिने खालको दिन छ । तपाईबाट जनव्यवहारमा खेलिएको भूमिका अल्लि नमिल्न तथा तालमेल नखानसक्ने देखिएकोले सावधानी अप्नाउन जरुरी हुनेछ । कार्यक्षेत्रमा पनि संघर्षको अनुभूति हुनसक्ने छ । रपनि अनपेक्षित कार्य बनेर राहत मिल्नेछ । वादविवादको समेत सम्भावना रहेकोले सम्भावित द्वन्दबाट बच्न यत्न गर्नुहोला । आज यहाँको लागि चार अंक, सेतो तथा उज्यालो रङ्ग शुभ रहनेछ भने नगरी नहुने कार्य सम्पादन गर्दा आमाबाट आज्ञा लिएर गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।
कर्कट राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन पुरुषार्थ बढ्ने र राम्रो उद्यम सम्पादन गर्ने विषयमा विचार विमर्श हुनेछ । मानमर्यादा गर्नुपर्ने व्यक्तित्त्वलाई खुशी बनाउनु तथा उहाँहरुबाट आर्शिवाद लिने गर्नाले ग्रहदोष न्यून भई महत्त्वपूर्ण काम फत्ते गर्न मद्दत हुनेछ । सामान्य दैनिकीको पक्षमा ग्रहले राम्रै बल दिइरहेको देखिन्छ । कामकार्यमा रुचि बढ्ने छ । स्वजनसँग भेटघाट हुने र सहयोग पाइने छ । प्रतिस्पर्धा जन्य काममा पनि अग्रता हासिल हुनेछ । आज यहाँलाई तीन अंक र हरियो रङ्गको प्रयोग बढी फापसिद्ध बन्नसक्ने छ भने गुरु गणपतिको सेवा आराधनाले भाग्यबृद्धि गर्नेछ ।
सिंह राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन ग्रहगोचरको केही अबरोधको बाबजुत पनि उमंग उत्साह बढ्ने खालको रहेको छ । आर्थिक लाभको संयोज जुट्ने छ भने प्राकृतिक रमाइलोपन मिल्ने छ । कार्ययोजनादिको बारेमा संवाद हुनसक्ने र नयाँ कार्यमा लगानी आदिको अवसर मिल्नसक्ने छ । अबसरको सदुपयोग गर्न जाने बोलीवचन एवं प्रवचन–भाषण आदिमा वाणीको ओजस्वीता बढ्नसक्ने छ । आज यहाँलाई दुई एवम् तीन अंक, सेतो र हरियो रङ्ग शुभ हुनेछ भने भगवान श्री गौरीदनन्दनको दर्शनभक्ति थप सफलताप्रद हुनेछ ।
कन्या राशि हुनेहरुको लागि आजको दिनलाई सामान्यतया ठिकै मान्न सकिन्छ रपनि तपाईलाई असफल कार्यप्रति गोचरले उल्क्याई रहेको हुनाले अवसरको दुरुपयोग हुने हो कि भन्ने डर देखिइरहेको छ । मनोआवेगलाई संयम गरेर समयको सदुपयोग गर्न सके दिनलाई सुध्रिएको तथा अनुकूल मान्नसकिन्छ । नयाँ व्यवसायिक कार्यको चिन्तनमनन् हुने तथा लगानीको अवसर मिल्नसक्ने छ भने नोकरी आदिको खोजीमा रहेकाहरुको लागि पनि दिन सकारात्मक देखिएको छ । विद्वानगुरुजनको आशिर्वाद ग्रहण गर्नु र भैरवदेवको आराधना स्तुति गर्नाले अल्झेको कार्य पनि पूर्णतातिर जानसक्ने छ । सकारात्मक सोँचलाई बढाउनु होला ।
वृश्चिक राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन भौतिक उन्नतिप्रद छ । प्रतिस्पर्धामा विजयोन्नमुख भइनेछ । पेशा तथा व्यवसायिक कार्यबाट आर्थिक लाभ गर्न सकिने छ । अध्यनअध्यापन एवं सन्तानको पक्षबाट पनि सन्तोष लिनसकिने छ । दिनको सदुपयोग गर्नाले अधुरा रहेका कामलाई पूर्णता दिनसकिने छ । स्वकार्यलाई समय दिनु बुद्धिमानी हुनेछ । विवाह योग्य युवायुवतीको विवाह प्रसङ्ग चल्नसक्ने सम्भावना छ भने प्रेमाभिलाषिहरुको लागि प्रेमसम्बन्ध जोडिनसक्ने पनि सम्भावना छ । आज यहाँलाई दुई अङ्क, सेतो रङ्गको उपयोग फापकर हुनेछ भने भगवान गजाननन्को भक्ति विशेष फापसिद्ध हुनेछ ।
धनु राशि हुनेहरुको लागि आजको दिन गोचर अनुकूलप्रद देखिएको छ । विशेष तहका व्यक्तित्त्वसँग संपर्क विस्तार हुनेछ, मानसम्मान मिल्नसक्ने छ । प्रस्तावमा अवसरको सदुपयोग गरी अघि बढ्नु बुद्धिमानी हुनेछ । मान्यजनप्रतिको श्रद्धाव्यवहार अल्लि बढाउनु पर्ने देखिन्छ । केही विशेष योजना बन्नसक्ने, औकात अनुसारको सफलता मिल्ने, वरिष्ठताको श्रेणी एवं व्यवसायिक लाभ हुनसक्ने छ । आज तपाईँको लागि एक र दुई अङ्क, रातो र सेतो रङ्गको उपयोग उपयुक्त हुनेछ भने कुमारी देवीको श्रद्धाभक्ति एवं स्तुति गर्नु थप सफलताप्रद हुनेछ ।
मकर राशिहुने व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन अध्यात्मिक तथा आस्तिक भावना बढ्ने र धार्मिक कार्यप्रति उत्प्रेरणा जागृत हुने दिन रहेको छ । समाजसेवा तथा परोपकार आदि कार्यमा पनि संलग्न हुन र प्रतिष्ठा कमाउन सकिने छ । व्यवसायमा पनि लक्ष्मी कृपा हुने ग्रहगोचरको प्रभाव परेको छ । यात्रायोजना एवम् नयाँ कार्यको थालनीको बारेमा परिवारिक विचार विमर्श हुनेछ । रोकिएर रहेका केही कार्यमा सफलता मिल्नेछ भने जागिरबाट पनि सन्तोष भइनेछ । आज यहाँहरुलाई नौ अङ्क, पहेलो रङ्गको प्रयोग र धार्मिक क्षेत्रलाई सहयोग गर्नु शुभप्रद हुनेछ ।
कुम्भ राशिका व्यक्तिहरुको लागि आजको दिन त्यति सहज देखिएको छैन । स्वास्थ्यमा गडबढी हुनसक्ने र गरिरहेको कामकार्यमा पनि झमेला आइलाग्नसक्ने सम्भावना छ । समयको प्रतिकूलतालाई नबुझि कुनै पनि कार्यमा हतार गर्दा उल्टो परिणाम आउनसक्ने र हानी नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने हुनसक्ने छ, ख्याल पुर्याउनु होला । यस्ता केही प्रतिकूलताको बाबजुत पनि स्वकर्ममा तल्लिन हुनाले अप्रत्यासित ढङ्गबाट कुनै उपलब्धि हातपर्न भने सक्ने देखिन्छ । आज आठ अंक, रातो रङ्गको प्रयोग शुभ हुनेछ भने रोगीको सेवाले पूण्य दिनेछ ।